Ahoana ny fampiasana ny clicker hampiofana ny alikao | Tontolo alika
Eo amin'ny sehatry ny fampiofanana alika dia mahita ny kojakoja mahavariana indrindra isika. Iray amin'izany ny tsindry, fitaovana kely mamoaka feo malefaka rehefa manindry ny bokotra izy, izay tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ny fanentanana tsara. Ny hevitra momba ny fahombiazany dia tena samy hafa: raha ho an'ny sasany kosa dia tena ilaina izy io, ho an'ny sasany kosa dia tsy ilaina velively. Na ahoana na ahoana, amin'ity lahatsoratra ity dia manazava torohevitra fototra vitsivitsy hampiasana azy izahay.
Ity bandy ity dia misy fantsom-by ao anatiny, izay mamoaka tsindry kely rehefa tsindriana. Raha ny filazan'ny manam-pahaizana sasany dia mety ho fandrosoana lehibe ity fihetsika kely ity raha ny fanabeazana ny alika no resahina, raha mbola amin'ny fomba tsara no ampiasana azy. Ny fototry izany rehetra izany dia ny fampifandraisana ilay biby amin'ny a famporisihana tsara.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manindry ny bokotra amin'ny fotoana marina isika rehefa manaraka ny baikontsika ilay alika, ary haingana valisoa ianao miaraka amin'ny sakafo, kilalao na safosafo. Mandritra ny dingana fanombohana dia ny fampiasana sakafo no mahomby indrindra. Zava-dehibe ny hanehoantsika am-bava ny baiko amin'ity dingana ity, mba hahafahan'ny alika mampifandray ny tenintsika amin'ny fihetsika iray.
Ny filamatra dia izany mifankahalala miaraka amin'ny clicker alohan'ny hanombohantsika mampiasa azy. Talohan'izay dia tokony avelanao hofongariny am-pahatokisana izy ary ho zatra ny tabataba avoakany. Hanampy anay hanome fitsaboana anao isaky ny maheno ny tsindry voalohany ianao, ka hatramin'ny voalohany dia ampifandraisinao amin'ny zavatra tsara izany. Ny alika sasany dia tsy mahatakatra loatra izany feo izany, koa zava-dehibe ny fahitantsika ny fihetsik'ireo biby fiompintsika. Raha mandositra izy na mampiseho tahotra, dia azontsika atao anaty lamba famaohana ao anaty lamba famaohana ilay lamba mba hampihenana ny tabataba.
Tokony ho fantatsika fa ny clicker dia fitaovana fampiofanana an-trondro izay tsy ilaina foana. Raha tratry ny herisetra na tahotra mafy, ohatra, dia tsara kokoa ny mitady fanampiana amin'ny matihanina amin'ity sehatra ity. Ho fantany hoe iza no fomba mety indrindra amin'ny alikanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fomba fampiasana ny clicker hampiofana ny alikao
Ahoana no hahafantarana raha manana parasy ny alikako